Joojinta Carnival Cruise Glory baajinta bixitaankii New Orleans
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Joojinta Carnival Cruise Glory baajinta bixitaankii New Orleans
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Kireystayaasha FEMA Carnival Cruise Line's Carnival Glory si ay u siiso Guryeyn Hurricane Ida jawaabayaasha ugu horreeya ee New Orleans.
Khadka Dalxiiska Carnival wuxuu baajin doonaa safarkii Glory ee la qorsheeyay inuu baxo 12ka Sebtember.
Carnival Glory oo hoy u noqon doonta 2,600 oo shaqaale cusbitaal ah, jawaabayaasha ugu horreeya iyo shaqaalaha kale ee gurmadka.
Khadka Carnival Cruise Line wuxuu qorsheynayaa inuu howlihiisa dib uga bilaabo New Orleans bisha Sebtember 19.
Khadka Carnival Cruise Line ayaa maanta shaaca ka qaaday inay heshiis la gashay magaalada New Orleans iyo Hay'adda Maareynta Degdegga ah ee Federaalka (FEMA) si ay u siiso Carnival Glory guryo -jawaabeyaasha ugu horreeya illaa iyo 18 -ka Sebtembar.
La xiriirta ogeysiiskan, Carnival wuxuu baajin doonaa safarkii Glory ee qorshaysnaa inuu baxo 12 -ka Sebtember wuxuuna qorshayn doonaa inuu dib u bilaabo howlihiisii ​​martida Carnival Glory oo ka yimid New Orleans Axadda, Sebtember 19. Carnival wuxuu horey u baajiyay bixitaankii Sebtember 5 ee Carnival Glory.
Carnival ammaanta soo gaaray Dekedda New Orleans Jimcihii waxaana lagu sameeyay kormeer loo baahnaa oo Ilaalada Xeebaha Mareykanka. Markabku wuxuu bilaabay bixinta cuntada, biyaha iyo agabyada si loogu diyaariyo ilaa 2,600 oo shaqaale cusbitaal ah, jawaabayaasha ugu horreeya, shaqaalaha magaalada iyo shaqaalaha iyo shaqaalaha kale ee gurmadka si ay ugu biiraan markabka. Markabku wuxuu joogi doonaa dekedda wuxuuna u ahaan doonaa guri deg -deg ah shaqaalaha safka hore ee sida tooska ah ugu lug leh soo kabashada kaabayaasha magaalada iyo baahiyaha daryeelka caafimaadka.
Christine Duffy, oo madax ka ah Qalab Qalal Qaadashada. "Waan ka mahadcelineynaa fahamka martidayada, kuwa aan naqaanno waxay jecel yihiin New Orleans sida aan annaguba u jecelnahay."
Waxaa lagu daray Brandy D. Christian, Madaxweynaha iyo Maamulaha Port NOLA iyo Maamulaha Tareenka Suunka Dadweynaha ee New Orleans. “Port NOLA waxay qaddarineysaa Carnival in Carnival Glory la geeyo New Orleans. Xarumaheeda waxay dejin doonaan jawaabayaasha ugu horreeya ee dadaala iyo shaqaalaha muhiimka ah ee ka shaqeeya dadaallada soo kabashada duufaanka ee gobolkeenna. Dekedda NOLA, Federaalka, gobolka, iyo wakaaladaha iskaashiga ee maxalliga ah dhammaantood waxay taageeraan kuwa sida dhaqsaha ah dib ugu soo celinaya kaabayaashii muhiimka ahaa ee magaalada oo gacan ka geysanaya sidii mar kale xamuulku u dhaqaaqi lahaa. ”
Dmytro Makarov wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Ukraine, wuxuuna ku nool yahay Mareykanka ku dhawaad ​​10 sano isagoo ahaa qareen hore.